Réponses pour «kevitra»:
Total: 36 résultats - 0.098 secondes
Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 100%
 Mahay maneho hevitra ary mahafehy ny teknikan’ny fanadihadiana lahatsoratra sy ny famakafakan-kevitra;
FORMULAIRE TOSIKART 95%
1 Filan-kevitra :034 87 703 03 - 034 87 687 18 – 034 13 728 29 NY TETIKASA / LE PROJET 1.
lalampanorenana 2010 92%
Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 91%
-Manohitra ny fanaovana an-jorom-bala ireo fiarahamonim-pirenena tao anatin'ny fihaonana sy ny fanapahan-kevitra kanefa izy ireo dia efa nandray anjara tamin'ny famolavolana io lalàna io.
TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 91%
- Fanolorana ireo Tantsoroka Nasionaly hitarika ny hetsika Famaritana sy fananganana vaomiera miisa 04 handrindra ny hetsika Fanapariahana ny Fifaninana sary famantarana sy Hira Jobily faha 80 taona Anjaran’ny isam-baomiera no hanolotra volavolan-kevitra hitondrana ny hetsika.
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 80%
2.1.Ho an’ny olona Mpampiofana Samy ilaina na ny mampita fahalalana maro mikasika foto-kevitra iray na ny mampita fanabeazana maro avy amin’izany.
-	“ Abrégé d’une doctrine de développement rural pour Madagascar ” no lohatenin’ilay Tahirin-kevitra namintinany izay noheveriny ho fampi­ voarana ny fiainan’ny Tantsaha.
L'amour de Dieu 73%
Miafina amin’ny foto-kevitra izay manda an’Andriamanitra ka tsy mandray intsony ny fahamarinan’ny tenin’Andriamananitra (filozofia sy tsanga-kevitra isan-karazany) Tsy misy mampanahy anefa fa Andriamanitra efa nanomana vahaolana lehibe lavitra noho ny olan’ny fahotana.
10 ANDRO 2018 72%
Ny fanirianay dia ny hahafahan’ireo hevitra sy tolo-kevitra manampy ny tarika madinika misy anao na ireo fianakaviamben’ny fiangonana manao fanandramana lehibe mandritra ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka.
FITSIPIKA TOSIK'ART 71%
Asabotsy 21 septambra 2019 Fiofanana sy fanoroan-kevitra :
dany 8.3 67%
Tsy misy izay tsy mahalala fa i Fįraşa no loharano-kevitra nananana io hevitra fototra momba ny fampisarantsarahana ny Lafin-kery sy ny vondrona samy hafa eo amin’ny lafiny Fitondrampanjakana io.
GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 67%
22 3D - Sarobidy ny vaovao, malalaka ny fanehoan-kevitra p.
SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 67%
Ny sasantsasany amin’izy ireny no nanovozan-kevitra hitondrana izao lahatsoratra famaranana izao.
IM9- version malgache 67%
“Nisy olona narary niditra hopitaly tao amin’ny fianakaviako, saingy andoavam-bola Loabary an-dasy tamin'ny 17 Oktobra 2015 avokoa ny zavatra rehetra eny amin’ny hôpitaly, eny fa na dia ny alikaola, ny fitaovam-panindromana, ny farafara aza… Noho ny tsy fisiana, dia nanapa-kevitra ny hitondra ny mararinay hody izahay.
fiche pcd fr mg CMP fianar 62%
- Décision concertée entre les Fokontany et la Commune concernant le reboisement sur l’ensemble de la Commune Groupe d’Etudes Rurales JanoaryJolay 2002 LASITRA FANJOHIAN-KEVITRA (Cadre Logique) TETIKASA :
Farany dia nanapa-kevitra hody aho.
dany .24 54%
Tamin’ny farany, mba ho nampandrosoana haingana an’i Madagasikara, dia nanapa-kevitra Radama II fa hañomé tany ny vahίny.
Ny hafa no niantsoroka sy nandány, teo amin’ny toerako, izány fanapahan-kevitra izáy nataony nifanohitra tamin’ny mahaáho ahy izány.
Tapa-kevitra mihίtsy ny Firenéna maro fa handroaka ny olombelona rehétra izáy voakasikasika aminřny heloka momba ny finoana Şįlámo hiála sy handáo ny taniny;
TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 41%
Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay izao.
ZIONA VAOVAO TANTARA 36%
Tamim-pifaliana no nandraisana ny soso-kevitra, eny fa na dia tsy mbola azon’ireo ray aman-dreny an-tsaina mazava tsara aza ny tian-kiaviana.
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 36%
A- FOMBA FANAOVANA « DISSERTATION PHILOSOPHIQUE » Ny zavatra hatao ao dia fanamarinana (justification), fanaporofoana (preuve), fandresen-dahatra (argumentation) ary fizohian-kevitra (raisonnement).
TADY LAHARANA 186 33%
mbola vitsy ny mpitsidika, mbola mihisatra ny fanehoan-kevitra.
dany .20 32%
Mety mitarika tanteraka sy feno tokóa ho amin’izány fañaporofoana izány –conditions nécessaires et suffisantes- sy ho amin’ny fomba fahatsapána, eo amin’ny lafiny mahaolombeloña ny olombeloña, ny endrikendri-pifandraisan’Andriamañitra Tįrinité Masina, ny famakafakána ny lalána matematίka izáy miféhy an’iréo rafi-kevitra şiãtifίka samiháfa iréo.